Hangers mora vidy, Sina, orinasa, mpanamboatra ary mpamatsy - Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co., Ltd.
Famaritana ny entam-barotraNy vady sambatra voalohany fiainana!
Ankizy nirohotra nihantona
Ny fambolena fefy pullover dia vita amin'ny plastika ABS. Toetoetra: ny fisehoan'ny fihodinana tsy mitongilana, fahatsapana malefaka, akanjo vita amin'ny lamba maivana, akanjo lava, tsy mila miahiahy momba ny famoahana ny fitafiana.
Famaritana komoditianaFU YA mpitaingina palitao vita amin'ny plastika misy tsihy tsy misy slipNy akanjo fanantonana ity dia manampy amin'ny fitazomana ny asanao sy ny fitafianao amin'ny faran'ny herinandro. Vita amin'ny plastika maivana sy mateza, ny mpanantona dia mifanentana tsara amin'ny zavatra rehetra manomboka amin'ny lobaka misy bokotra sy T-shirt lava volo ka hatramin'ny akanjo, blazer ary blazer.
Hanger palitao fotsy
Fampahalalana momba ny vokatraFonosana entana: 10 | loko: greyNy antsipiriany ara-teknikaSize 42,42 x 0,64 x 20,96 cm; 428.19 g
Ahantona palitao manjelanjelatra ho an'ny ankizy
Fampahalalana momba ny vokatraToko: Paloma greyNy antsipirian'ny teknikaNy haben'ny vokatra: 0.38 x 30.48 x 21.59 cm; 204.12 g
Ny orinasa Hangers dia manana kalitao avo, tsara laza ary serivisy mieritreritra ary nahazo dera iraisan'ny mpanjifa tao an-trano sy tany ivelany. Miaraka amin'ny vidiny mora dia hahazo Hangers serivisy sy serivisy tena tsara ianao. Miaraka amin'ny "kalitao tena tsara manome marika miavaka" ho tanjon'ny orinasa, ampiharo fatratra ny fenitra momba ny rafitra fanamarinana kalitao ISO9001, 9002 ~